Momba ny JBH - AnHui Jin Bai He Medical Apparatus Co., Ltd.
AnHui Jin Bai He Medical Apparatus Co., Ltd. natsangana tamin'ny 2013.
Orinasa miorina amin'ny famokarana miaraka amin'ny ekipa R&D, famokarana ary ekipa marketing iraisam-pirenena manana vokatra namboarina sy vokatra ODM ho an'ny mpanjifa.
Vokatra lehibe ao anatin'izany ny sarontava amin'ny fandidiana, fampiakarana marary, fandriana hopitaly. Ny vokatra rehetra dia nahazo ny fanamarinana ny varotra FDA, CE, ary CFDA amin'ny firenena 40 manerantany, manarona an'i Amerika atsimo sy Avaratra, Aostralia, atsimo atsinanan'i Azia, atsinanana atsinanana, HK, Macao, Taiwan, ary ireo firenena hafa.
. Fitsangatsanganana an-trano ▍ Andalana famokarana sarontava Work Fiaraha-miasa ▍ Vaovao sy hetsika
. Fitsangatsanganana an-trano
Tamin'ny taona 2018, ny seza misy kodiarana JBH dia nisolo an'i R.POON MEDICAL PRODUCTS CO. LTD. (Uniforce®️), karazana vokatra nivelatra ara-tetika, toy ny Patient Lifter, Walking Aids, Patient Bed and Bathroom Safe, sns. R.POON MEDICAL dia orinasa fanta-daza iray izay niorina tamin'ny 1983, Taiwan, nifindra tany Foshan, Sina ary ankehitriny ao amin'ny faritanin'i Anhui miaraka amin'ny velaran'ny 140.000 metatra toradroa sy mpiasa matihanina an-jatony izay manana ny fanahin'ny ekipa fampidirana, fanomezana fahafaham-po, fanavaozana ary fanatsarana ny mpanjifa, famolavolana vokatra vaovao hatrany hanomezana loholona sy mpikirakira tanana fiainana tsotra, mora ary tsara kokoa.
▍ Factory in Nanjing City
Any amin'ny tanànan'i Nanjing, faritanin'i Jiangsu (seza misy kodiarana JBH) 12, orinasa mpamokatra 800 metatra toradroa.
▍ Orinasa any Mingguang City
Any amin'ny tanànan'i Mingguang, faritanin'i Anhui (Uniforce®️) 140, orinasa mpamokatra 000 sq.
Andalana famokarana sarontava
▍ Maninona izahay no manamboatra sarontava
Raha ny tena izy dia toy ny mpanamboatra fitaovana ara-pitsaboana, ny JBH dia manana mpiasa marobe miovaova sy loharanon-karena R&D be dia be hananganana tsipika famokarana saron-tava fandidiana azo ampiasaina, ary nahavita azy io.
Ny foibe fanaovana maska ​​fandidiana dia natsangana tao amin'ny orinasa JBH Anhui, tanànan'i Mingguang. Ary ankehitriny isika dia afaka manome mason-tsivana maherin'ny 3.000.000 azo antoka sy mahay ankehitriny. Tsy nisalasala ianao nandidy azy io. Tsy maninona rehefa tena tongasoa ny fitsidihana ny orinasa ihany koa.
▍ Ekipa R&D
20 taona injenieran'ny traikefa amin'ny indostria.
Famolavolana vokatra vaovao sy entana namboarina.
Valin'ny tsena haingana.
▍ Ekipa mpivarotra
Mijanona amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa 24/7.
Fotoana fohy famaliana.
Superior Tsara aorian'ny fivarotana asa fanompoana.
▍ Ekipa miasa
Fahaiza-manao asa matihanina, mibaiko sehatra tambajotra mihoatra ny 5 hampiroborobo ny varotra sy ny fampielezan-kevitra.
mpamonjy marary marary herinaratra, fandriana azo ovaina amin'ny fitsaboana, fandriana azo ovaina ho an'ny marary, saron-tava azo ampiasaina, sarontava tarehy, mpanandratra marary hydraulic,
mpamonjy marary marary herinaratra, fandriana azo ovaina amin'ny fitsaboana, mpanandratra marary hydraulic, fandriana azo ovaina ho an'ny marary, saron-tava azo ampiasaina, sarontava tarehy,